Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo Context link | UnitedHealthcare Community Plan: Medicare & Medicaid Health Plans
Su'aalaha inta badan la iska weydiiyo dadka haysta Medicaid iyo Medicare Context link
Su'aalaha aalaaba la isweydiiyo Context link
UnitedHealthcare ma qayb ayay ka tahay Medicare?
Qorshayaasha caafimaadka UnitedHealthcare waxaa bixiya Shirkadda United Healthcare Insurance Company iyo shirkadaha ku xiran. Annaga (iyo shirkadaha kale ee caymiska ee gaarka loo leeyahay) waxaan la shaqaynaa hay'adaha dawlada dhexe iyo kuwa gobolka si ay u bixiyaan caymiska caafimaad ee ay dawladdu maalgaliso. Ma nihin qayb ka mid ah Medicare. Waxaan la shaqaynaa Xarumaha Adeegyada Medicare & Medicaid (CMS) iyo dawlad-goboleedyo badan si ay u bixiyaan caymiska caafimaadka ee dadka haysta Medicare iyo Medicaid. Wax badan ka ogow Medicare.
Qorshayaasha laba geesoodka ah ee dadka qaba baahiyaha gaarka ah (oo sidoo kale loo yaqaano qorsheyaasha caafimaad ee laba geesoodka ah ama D-SNPs marka la soo gaabiyo) waxaa loogu talagalay dadka u-qalma Medicare iyo Medicaid labaduba. Qorshaha caafimaad ee laba geesoodka ah ayaa la shaqeeya qorshaha caafimaadkaaga ee Medicaid. Waad haysan doontaa dhammaan macaashyadaada Medicaid. Qorshayaasha caafimaad ee laba geesoodka ah ayaa daboola booqashooyinka dhakhtarka, dhigista isbitaalka iyo daawooyinka dhakhtarku qoro ee loo qalmo.1 Dadka u-qalma, qorshaha caafimaad ee laba geesoodka ah ayaa laga yaabaa inuu bixiyo macaashyo caafimaad oo ka badan kuwa Original Medicare iyo qorshaha Part D oo gooni ah.
Qorshayaasha caafimaad ee laba geesoodka ah:
Waxaa loogu talagalay dadka laga yaabo inay u baahan yihiin caawimaad dheeraad ah naafonimo, da'da iyo/ama xaaladaha caafimaad awgood
Waxay bixiyaan macaashyo ka badan kuwa Original Medicare1
Waxaa bixiya shirkadaha caymiska ee gaarka loo leeyahay sida UnitedHealthcare
Ma wataan wax kharash dheeraad ah
1Macaashyada, sifooyinka iyo/ama aaladaha way ku kala duwan yihiin qorshe/aag kasta. Xaddidaado iyo ka-dhaafitaano ayaa khuseeya.
(Xitaa haddii aad haysato carbuunta caymiska — taasi waa qadarta aad ku bixiso caymiska — waad u-qalmi kartaa kabitaanada dadka dakhligoodu hooseeyo si lagaaga caawiyo bixinta kharashka.) Wax badan ka ogow qorshayaasha laba geesoodka ah ee dadka qaba baahiyaha gaarka ah.
Yaa u-qalmi kara Medicaid?
Dhammaan gobolada, Medicaid waxay wuxuu ka bixiyaa caymiska caafimaadka ee loogu talagalay qaar ka mid ah dadka dakhligoodu hooseeyo, qoysaska iyo carruurta, haweenka uurka leh, waayeelka, iyo dadka qaba naafonimada. Gobolada qaarkood, Medicaid wuxuu caymiyaa dhammaan dadka qaangaarka ah ee dakhligoodu hooseeyo ilaa heer dakhli oo cayiman.
Waa maxay shuruudaha u-qalmitaanka Medicaid?
Shuruudaha saxda ah ee lagu heli karo Medicaid waxay ku xiran yihiin halka aad ku nooshahay. Si aad u ogaato inaad u-qalanto Medicaid ka jira gobolkaaga, booqo mareegta Medicaid ee gobolkaaga. Kadib hubi shuruudaha u-qalmitaanka.
Waxaad ka heli doontaa xiriiriyaha mareegta ee wakaalada Medicaid ee gobolkaaga bogga "Faahfaahinta Qorshaha" ee loogu talagalay qorshe kasta ee ay bixiyaan UnitedHealthcare Community Plan. Si aad u aragto qorshayaasha laga heli karo aaggaaga, fadlan ka isticmaal qaybta raadinta ee boggeena hore ah UHCCommunityPlan.com.
Ma haysan karaa Medicaid iyo caymiska gaarka ah?
Medicaid waa barnaamij daryeel caafimaad oo heer gobol ah oo ay maamusho dawlad-goboleed kasta. Si kastaba ha ahaatee, dawlad-goboleedyadu ma bixiyaan caymis caafimaad. Dawlad-gobaleedyadu waxay qandaraas la galaan shirkadaha caymiska ee gaarka loo leeyahay sida UnitedHealthcare si ay u siiyaan caymiska caafimaadka samadheefsadayaasha Medicaid iyo barnaamijyada kale ee daryeelka caafimaadka ee dawladda. Qorshayaashayada caafimaad ee ay dawladu maalgaliso waxay ku shaqeeyaan magaca UnitedHealthcare Community Plan.
Medicare waa barnaamijka caymiska caafimaadka ee qaranka oo ay maarayso dawladda dhexe. Waxaa loogu talagalay dadka da'doodu tahay 65 jir iyo ka weyn, iyo sidoo kale dadka qaarkood ee da'doodu ka yar tahay 65 jir ee qaba naafonimo gaar ah. Wax badan ka ogow Medicare.
Medicaid waa barnaamij ay leeyihiin dawladda dhexe iyo gobolka oo siiya caymiska daryeelka caafimaadka dadka u-qalma. Gobol kasta wuxuu leeyahay barnaamijka Medicaid oo u gaar ah, balse dawladda dhexe waxay leedahay xeerar ay tahay in dhammaan gobolladu raacaan. Dawladda dhexe waxay sidoo kale bixisaa ugu yaraan kala bar maalgelinta si loo buuxiyo shuruudahooda Medicaid. Ogow wax badan oo ku saabsan waxa Medicaid yahay iyo wuxuu Medicaid daboolo.
Markaad haysato qorshaha laba geesoodka ah ee UnitedHealthcare, ma u baahan tahay inaad hesho gudbin si aad u aragto takhasusle?
Maya. Gudbin looma baahna si daryeel looga helo dhakhaatiirta, isbitaalada ama rugaha caafimaadka ee ku jira shabakadda.
Waa maxay macaashyada caadiga ah ee ay inta badan daboolaan qorshayasha laba geesoodka ah ee UnitedHealthcare?
Qorshayaashayada laba geesoodka ah waxay inta badan daboolaan daryeelka kahortagga ah iyo adeegyada caadiga ah iyadoo aan wax kharash dheeraad ah lagaa rabin. Waxaan sidoo kale gacan ka geysanaa isku-xirka macaashyada Medicaid. Macaashayada kale ee caadiga ah ee inta badan ay daboolaan qorshayaashayada laba geesoodka ah waxaa ka mid ah:
Khadka tooska ah ee kalkaalinta]
Iyo macaashyo iyo sifooyin kale oo badan1
Gundhiyada Medicaid Context link
Maxaa dhacaya haddii aan u-qalmi waayo Medicaid?
Haddii aad ka diiwaangashan tahay qorshaha laba geesoodka ah ee UnitedHealthcare oo aad u-qalmi waydo Medicaid, waxaan ku gelin doonaa hakin ilaa 6 bil Inta lagu gudajiro waqtigan, waa inaad bixisaa qaybta kharashka ee kugu soo aado ee Medicare sida lacagta go'an ee caymiska, lacagta caymis-haystaha ku soo aado, lacagaha caymiska ee la jari karo iyo curraarta camiska. Haddii aad dib ugu qalmi waydo Medicaid dhammaadka 6 bil, waxaa lagaa saarayaa diiwaanka qorshaha labada geesoodka ah.
Balse xasuusnow, waad iska diiwaangelin kartaa qorshaha laba geesoodka ah waqti kasta. Haddii aad dib u hesho caymiska Medicaid, kaliya la hadal wakiilka iibka ee ruqsada haysta ee UnitedHealthcare si aad dib isaga diiwaangeliso qorshaha laba geesoodka ah.
Waa maxay adeegyada Medicaid ay daboolaan?
Gobol kasta wuxuu maamulaa barnaamijkiisa Medicaid marka waxa ay Medicaid daboolaan way isbedeli karaan gobol ka gobol. Balse waxaa jira adeegyo ay tahay in gobol kasta uu ku daboolo barnaamijkiisa Medicaid sida sharciga dawladda dhexe qabo. Kuwaani waxaa loo yaqaanaa macaashyada khasabka ah. Goboladu waxay sidoo kale dooran karaan inay bixiyaan macaashyada kale ee hoos yimaada Medicaid. Kuwaani waxaa loo yaqaanaa macaashyada ikhtiyaariga ah.
Macaashyada Medicaid ee khasabka ah waxaa ka mid ah:
Daryeelka Isbitaal ee Bukaan-jiifka
Kalkaalinta xirfadlaha ee muddada gaaban ee bukaan-jiifka ama daryeelka xarunta baxnaaninta
Daryeelka bukaan-socodka ee isbitaalka ama rugta caafimaadka
Daryeelka caafimaad ee guriga ee mudada gaaban (waxaa bixisa wakaalada daryeelka caafimaadka guriga)
Daawooyinka dhakhtarku qoro ee loogu talagalay dadka aysan daboolin Medicare
Macaashyada ikhtiyaariga ah ee ay bixiyaan gobollada qaarkood waxaa ka mid noqon kara:
Baaritaanada iyo muraayadaha indhaha
Baaritaanada maqalka iyo aaladaha maqalka
Baaritaanada kahortagga ah
Daaweynta jireed (ka baxsan waxa lagu bixiyo Medicare)
Gaadiid-raac aan degdeg ahayn oo lagu tago iyo looga imaado daawaynta caafimaadka
Qaar ka mid ah daawooyinka dhakhtarku qoro oo aysan daboolin Medicare
Qaar ka mid ah daawooyinka uusan dhakhtarku qorin, oo ay ku jiraan fiitamiinada qaarkood
Medicaid ma daboosho lacagaha caymiska ee la jaro?
Inta badan, Medicaid waxay bixisaa kharashka buuxa ee adeegyada la daboolo, marka dadka haysta Medicaid ma ahan inay bixiyaan carbuunta caymiska ee billaha ah ama lacag kasta oo caymis ee la jaro. Balse waxaa ka jira ka-dhaafitaano iyo sharciyo kala duwan gobol kasta. Mararka qaarkood, haddii qofku uu haysto macaashyada Sugnaanta Bulshada, qadar yar ayaa laga yaabaa in laga jaro macaashyadaas si loo daboolo kharashka caymiska Medicaid.
Sidee Medicaid ula shaqeeyaan caymisyada kale?
Inta badan, Medicaid waa bixiyaha ugu dambeeya oo la maciinsado. Taas macnaheedu waa in Medicaid ay bixin doonaan lacagta kadib marka bixiyaha kale uu dhiibo qaybtiisa adeegyada la bixiyo. Tusaale ahaan, haddii aad leedahay Medicare ama nooc kasta oo ka mid ah caymiska daryeelka caafimaadka ee gaarka ah, Medicaid waxay had iyo jeer ahaan doonaan bixiyaha labaad. Bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka ayaa marka hore lacagta ku soo dallici doona bixiyaha aasaasiga ah, Medicaid ayaa bixin doonaan waxa soo hara. Taasi waa sababta dadka isku diiwaangeliyay Medicaid ay tahay inay sheegaan inay haystaan ilo kale oo caymis ah.
Maxaa la iiga baahan yahay si aan u codsado Medicaid?
Markaad codsanayso Medicaid, waxaa lagaaga baahan doonaa inaad buuxiso foom codsi ah. Gobolo kala duwan ayaa leh shuruudo kala duwan oo loogu talagalay Medicaid. Waxay u badan tahay in lagaaga baahdo dukumentiyo kala duwan, sida:
Macluumaad ku saabsan xubnaha qoyska (magaca, taariikhda dhalashada iyo Lambarka Sugnaanta Bulshada)
Macluumaadka kirada ama amaahda guriga
Kharashyada (korontada iyo biyaha, xanaano-maalmeedka, iwm.)
Dakhliga (jeegaga mushaarka)
Caddaynta naafanimada ama diiwaannada caafimaadka ee muujinaya xaalad caafimaad oo waarta
Biilasha caafimaadka ee ugu dambeeyay
Sideen isugu diiwaangelin karaa Medicaid?
Waxaad u baahan doontaa inaad ka codsato wakaaladda gobolka ee maarayso barnaamijka Medicaid ee ka jira gobolkaaga. Wixii su'aalo ah, ama si aad u aragto qorshayaasha caafimaadka UnitedHealthcare Community Plan ay ka bixiso aaggaaga, fadlan ka isticmaal habka raadinta ee boggayaga hore barta UHCCommunityPlan.com.
Medicaid + Medicare. Context link
Waa maxay farqiga u dhexeeya Medicaid iyo Medicare?
Medicaid wuxuu siiyaa caymis caafimaad malaayiin qof oo ay kujiraan dad waaweyn oo dakhligoodu hooseeyo, carruur, dumar uur ah, dad waayeel ah iyo dad naafo ah. Context link Medicaid waxaa si wadajir ah u maalgeliya dawlad-goboleedyada iyo dawladda dhexe. Medicare waa barnaamij federaali ah. Waxay siiyaan caymis dadka da'doodu tahay 65 jir iyo ka weyn, iyo sidoo kale dadka qaarkood ee da'doodu ka yar tahay 65 jir oo u-qalma naafonimo awgeed. Wax badan ka ogow farqiga u dhexeeya Medicaid iyo Medicare.
Ma wada haysan kartaa Medicare iyo Medicaid isku mar?
Haa. Dadka qaarkood ayaa u-qalma Medicare iyo Medicaid labaduba. Dadkaan waxay ugu qalmaan Medicare da'da awgeed (da' ahaan 65 ama waayeelnimo) ama iyadoo ugu wacan tahay inay qabaan naafonimo. Waxay sidoo kale u-qalmaan Medicaid maadaama ay buuxiyeen shuruudaha Medicaid ee gobolkooda. Dadka u-qalma Medicare iyo Medicaid labaduba waa kuwo "u-qalma labada caymis." Wax badan ka baro haysashada Medicare iyo Medicaid labaduba.
Sidee ayaad ugu qalmi kartaa Medicare iyo Medicaid labaduba.
Medicare iyo Medicaid waa laba barnaamij oo kala duwan kuwaasoo leh shuruudo u-qalmitaan oo kala duwan.
Si aad ugu qalanto Medicare, waxaa lagaaga baahan yahay inaad:
Ugu yaraan tahay 65 sanno jir, ama aad ka yar tahay 65 sanno oo aad ugu qalanto naafonimo awgeed ama xaalado kale oo gaar ah
Tahay muwaadin Ameerikaan ah ama deggane sharci haysta oo ku noolaa gudaha Mareykanka ugu yaraan 5 sanno oo xiriir ah
Si aad ugu qalanto macaashyada Medicaid ee gobolka, waxaa lagaaga baahan yahay inaad:
Ka yar tahay da'da 65 jir waana inaad buuxiso shuruudaha qoysaska dakhligoodu hooseeyo, haweenka uurka leh iyo carruurta, shakhsiyaadka hela Dakhliga Sugan ee Kabbista ah (SSI), naafonimada ama xaalad kale oo gaar ah
Ugu yaraan tahay 65 sanno jir iyo inaad sidoo kale:
Ka hesho Caawimaad Dheeraad ah ama kaalmo gobolkaaga
Tahay indhoole ama qabto naafonimo, balse aadan u baahnayn daryeelka muddada-dheer
Iyadoo qayb ka ah Xeerka Daryeelka La Awoodi Karo, gobolada intooda badan waxay doorteen inay balaariyaan caymiska Medicaid si loogu soo biiriyo dhammaan dadka waaweyn ee dakhligoodu hooseeyo 65. Gobolada kale waxay dooran karaan inay sidaasi sameeyaan waqti kasta. Dad badan ayaa yaabeen markay ogaadaan inay u-qalmaan. Taasi waa sababta ay had iyo jeer u wanaagsan tahay in wax la iska hubiyo.
Si aad u aragto inaad u-qalanto Medicaid ka jira gobolkaaga, booqo mareegta Medicaid ee gobolkaaga. Kadib hubi shuruudaha u-qalmitaanka.
Sidee Medicare iyo Medicaid u wadashaqeeyaan?
Xeerka Daryeelka La Awoodi Karo wuxuu ka sameeyay xafiis cusub gudaha Xarumaha Medicare & Medicaid (CMS). Xafiiska Isku-dubaridka ee Medicare-Medicaid wuxuu hubiyaa in dadka haysta labada caymis ee Medicare iyo Medicaid ay si buuxda u heli karaan daryeel caafimaad oo tayo sare leh. Hadafku waa in laga dhigo labada barnaamij kuwo u wadashaqeyn kara si wax-ku-ool ah si kor loogu qaado daryeelka oo kharashaadka loo dhimo.
Barnaamijyada Medicaid waxay caawin karaan Medicare iyagoo bixinaya kharashaadka Medicare qaarkood. Iyo iyagoo daboolayo macaashyada aysan bixin Medicare, sida maqalka, gaadiid-raaca, aragga, ilkaha iyo daryeelka muddada-dheer.
Qorshayaasha laba geesoodka ah ee dadka Qaba baahiyaha gaarka ah (labada qorshe loo qalmo) Context link
Maxaa loola jeedaa u-qalma labada caymis?
"U-qalma labada caymis" waxay qeexaysaa dadka u-qalma Medicare iyo Medicaid isku waqti. Dadkaan waxay u -qalmaan labada barnaamij, sidaas awgeed waa "dad u-qalma labada caymis."
Waa maxay macaashyada qorshaha laba geesoodka ah ee dadka qaba baahiyaha gaarka ah?
Qorshayaasha caymiska caafimaadka ee laba geesoodka ah ayaa bixiya macaashyo iyo adeegyo aan caadi ahaan la heli karin iyadoo loo marayo Medicare ama Medicaid. Markaad ku jirto qorshaha labada geesoodka ah ee caafimaad, waxaad sii haysan doontaa macaashyadaada Medicaid, waxaadna heli doontaa macaashyo ka badan kuwa Original Medicare oo ka hooseeya $0 carbuunta qorshaha. Qorshayaasha caafimaad ee laba geesoodka ah ee UnitedHealthcare waxaa ku jira macaashyo iyo sifooyin dheeraad ah oo kala duwan.1
Qorshayaashayada waxay dabooli karaan:
Daryeelka ilkaha ee joogtada ah
Dhibcaha lagu gato alaabta OTC iyo raashinka caynsan Context link
Baaritaanada indhaha, iyo qiimo-dhimista loogu talagalay muraayadaha indhaha
Baaritaanada maqalka, iyo qiimo-dhimista loogu talagalay qalabka maqalka
Qaar ka mid ah qorshayaasha caafimaad ee laba geesoodka ah ayaa sidoo kale waxaa ku jira isuduwidda daryeelka. Taasi waa caawimaad weyn — gaar ahaan dadka qaba baahiyaha caafimaad ee adag. Waxay kuu sahlaysaa inaad maareyso dhakhaatiirtaada, khabiiradaada iyo adeegyada daryeelkaaga. Ogow wax badan oo ku saabsan macaashyada qorshaha caafimaadka laba geesoodka ah.
Fadlan ogow in qorshayaashada laba geesoodka ah ee UnitedHealthcare ay bixiso, iyo macaashyada khaaska ah ee ay ka kooban yihiin, ay isbedeli karaan iyadoo ku xiran tahay halka aad ku nooshahay. Si aad u hesho faahfaahin ku saabsan qorshayaasha laba geesoodka ah ee laga heli karo aaggaaga, fadlan ka isticmaal qaybta raadinta ee boggeena hore ah UHCCommunityPlan.com.
Waa maxay shuruudaha u-qalmitaanka qorshayaasha laba geesoodka ah ee dadka qaba baahiyaha gaarka ah?
1. Ma heshaa macaashyada Medicaid ee gobolka? (Haddii ay sidaasi tahay, waxaad heli doontaa kaarka Medicaid ee gobolka.)
Waxaad ka yar tahay da'da 65 jir waana inaad buuxiso shuruudaha qoysaska dakhligoodu hooseeyo, haweenka uurka leh iyo carruurta, shakhsiyaadka hela Dakhliga Sugan ee Kabbista ah (SSI), naafonimada ama xaalad kale oo gaar ah
Waxaad ugu yaraan tahay 65 sanno jir iyo inaad sidoo kale:
2. Ma leedahay Medicare Parts A iyo B?
Waxaad ugu yaraan tahay 65 sanno jir, ama waxaad ka yar tahay 65 sanno oo aad ugu qalanto naafonimo awgeed ama xaalado kale oo gaar ah
Waxaad tahay muwaadin Ameerikaan ah ama deggane sharci haysta oo ku noolaa gudaha Mareykanka ugu yaraan 5 sanno oo xiriir ah
3. Ma ku nooshahay aag laga heli karo qorshayaasha laba geesoodka ah?
Wakiilka iibka ee ruqsada haysta ee UnitedHealthcare ayaa kuu sheegi kara haddii aad ku nooshahay gudaha aagga adeegayada. Ama si aad u aragto qorshayaasha laga heli karo aaggaaga, fadlan ka isticmaal qaybta raadinta ee boggeena hore ah UHCCommunityPlan.com.
Goorma ayaad codsan kartaa qorshaha laba geesoodka ah ee dadka qaba baahiyaha gaarka ah?
Laga bilaabo Janaayo 1, 2020, qorshayaasha laba geesoodka ah ee dadka qaba baahiyaha gaarka ah dib dambe uma lahan waqti isdiiwaangelin oo gaar ah oo aan xadidnayn. Waxaa jira Muddada Isku Diiwaangelinta Caymiska Gaarka ah (SEP) oo socota 9 bil ee ugu horreeya sannadka. Dadka u-qalma way is-diiwaangelin karaan ama beddeli karaan qorshayaasha hal mar 3 bil kasta. Isbeddellada is-diiwaangelintu waxay dhaqangeli doonaan maalinta koowaad ee bisha soo socota.
XUSUUSIN: Waxaa muhiim ah in la xasuusnaado in si aad xaq ugu yeelato qorshaha caafimaad ee laba geesoodka ah, ay tahay inaad dib u xaqiijiso Medicaid sannad walba. Ilaa iyo inta aad u-qalmato, qorshaha caafimaadkaaga ee laba geesoodka ah ayaa si toos ah loo cusboonaysiin doonaa sannad kasta. Ogow wax badan oo ku saabsan isku diiwaangelinta qorshaha laba geesoodka ah .
Cusbooneysintii Ugu Dambeysay: 03.22.2022 waqtiga 11:42 SUBAXNIMO CDT